SingForYou.net - mattayathar's Channel
mattayathar 's Channel
Last Login: 09-30-2012 03:12
Website No Website
Relationship no answer
Education no answer
iora on Dec 2, 2011
အိုးးး လှ လိုက် တာ.. ရေ ကန် အ သင့် ကြာ အ သင့် ပဲ.. ရင် ထဲ ကို အေး ချမ်း သွား စေ ရေ ခဲ ရေ.. အာ.. မှား လို့.. ကြာ ပန်း တွေ လို့ ဆို ချင် တာ ပါ..... သ ချင်း လေး တွေ ဆို လို့ ပျော် ရွင် ပါ စေ ကွယ်............း)
santimaung on Nov 18, 2011
thu toe gyi bel lar lel lo bel pyit ma lel sis lel lar lel myre paut kyan pann twae lel khuu twar the naw
paradise on Nov 10, 2011
လာ လည် တဲ့ သူ က လည်း အိမ်ေ၇ှ့ က နေ လှည့် ပြန် သွား တာ ကိုး.....ဒီ မှာ က အိမ် ထဲ မှာ ချက် ပြုတ် နေ တာ.....အဲ့ ဒီ တော့ လည်း ၀ါး တီး လေး နဲ့ လွဲ သွား တာေ ပါ့ နော့.....:D ဟမ် မ လေး အ မှတ် တ မဲ့ ချန် နယ် အ တွင်း ကို လှမ်း ကြည့်လိုက် တာ လန့် တောင် တွား တယ်.....ပါ မှ ဟုတ် ပါ ဘူး.....မီး တ ရဲ ရဲ့ နဲ့ ဖ ရုံ သီး ကြီး ကို မြင် သွား လို့..ခွီးးးးးးးးးးးးး....:P သီ ချင်း တွေ ဆို ရင်း ပျော် ရွှင် နိုင် ပါ စေ နော်.......း)
saungnge on Oct 9, 2011
ကဲ.. တို့လဲ လာလည်ပြီ အကိုမတ္တရာသားရေ ... ဘာကျွေးမှာတုန်း..လောလောဆယ် တော့ ဗိုက်ပြည့်နေလို့ ဘာမှ မစားဖူးထင်လား...ဟီးးးးးးးးးးးးး ကဲ ကဲ ...အတည်ပြောမယ်နော်... အသံကောင်းအဆိုကောင်း ချန်နယ်ကို လာရောက်လည်ပတ်သွားပါတယ်လို့... သီချင်းတွေ သွားနားထောင်လိုက်ဦးမယ်...ပြန်ပြီ.. တာ့တာ ... အားပေးလျက်ပါ အဲဗားနော် အဲဗား :D
shellyphyo on Oct 1, 2011
အောက်က နှစ်ယောက်ကတော့ အမြဲ ဦးတမ်းဆော့ နေကြတာပဲနော်.လာလည် ပါတယ်ရှင့် ။ သူများကြ ပြောပြီး သူကျ ဘာမှလဲ ရှိဘူး.သီချင်းလေး ၃ပုဒ်ပဲ ရှိသေးတယ်.လာဆိုဦးနော် အားရင်.း)
mikekhal on Sep 21, 2011
လာ ပါပြီ... လာပါပြီ .. လာပြါ့ပီ... မိုက်ခဲ ရောက်တော် မူ လာပါပြီ ဟီးး ဟီးးး-) အောက်က လူကြီး က ဘာတွေ ဖြစ်နေတာ လဲ ..တစ်ယောက်တည်း နေရာ ဦးတိုင်း ဆော့နေသေးတယ် . ကလေး လည်း ဟုတ်ဘဲနဲ့.. ခစ် ခစ်.. ကဲကဲ တူ့ပြောနေတာ နဲ့ပဲ ငါတို့ ရဲ့ ဘရို အသစ် စက်စက် လေးကို ကြိုဆိုဖို့မေ့နေပြီ... ပျော်ရင် လည်း သီချင်းဆိုပါ. စိတ်ညစ်ရင်လည်း သီချင်းဆိုပါ. ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဆိုသာ ဆိုပါ.. အမြဲ ခံစား နားဆင်လျက် ပါ နော်... :D
tyrence on Aug 31, 2011
ကဲ.. အရင် ဦးဆုံးကို လာလည်သွားတယ်.. ငါကွ.. ဟက်ဟက်း) ... ကြိုဆိုပါတယ်နော်.. အဆင်ပြေသွားလို့ ဝမ်းသာတယ်.. သီချင်းတွေကို ဆက်တိုက်သာ ကစ်ပေတော့.. ပထမဆုံး သီချင်းမှာတင် ရှယ်ကို လန်းနေပြီ... ဟက်ဟက်း) .. လုံးဝကို အားပေးနေတယ်.. ဟက်ဟက်
View All Recordings of mattayathar